yakanakisa pokémon enda yekutevera uye radar maapplication eApple
Kuru Nhau & Ongororo Iyo yakanakisa Pokémon Go yekutevera uye radar maapplication eApple
Iyo yakanakisa Pokémon Go yekutevera uye radar maapplication eApple
Sango rePikachu muTokyo, Japan
Nguva pfupi yadarika takaita a Pokemon Go tracker maapplication kutenderera kweiyo iPhone , uye boka revashandisi vakatikumbira kuchera zvimwe zveAndorid, futi, saka heino scoop. Semazuva ese, isu & apos; hatikurudzire kuti usashandise Pokemon yako huru kuenda account yekupinda mukati meavo vechitatu-bato, asi yechipiri kungotarisa-tarisa uone izvo maapos aripo.
Nepo Niantic ichirovera pasi imwe yekutanga uye inonyanya kuzivikanwa Pokemon trackers - PokeVision - uye yakaremadza maAPI ayo kune akati wandei mamwe madesktop edhizaiti, hapana kana zuva rakapfuura pasina akafanana radar mhinduro dzinodzoka mufomati fomati pazvishandiso zvekushandisa. Dzimwe dzadzo dzinongogara mazuva mashoma pasosi yeAPI isati yadzikwa, asi vamwe vakapfuudza chirongwa ichi nezviyero zvakaunganidzwa nevanhu, uye vari kugara vachivandudzwa uye vachishanda. Iyo nyowani Pokemon tracker maapplication anopa zvakanyanya kupfuura matipi enzvimbo, ndosaka isu tiri kutenderedza mashoma eano freshest trackers ayo abuda kumusoro kubva pakupunzika.
PokéMapper-Pokemon Go Mhenyu Mepu
Tora iyi nguva ichiri & apos; ichiri kuGoogle Store. Zviri pachena kuti yakanakisa yemahara Pokemon tracker, PokéMapper inopa akasiyana mafirita ekutsoropodza, ziviso uye mafambiro. Izvo zvinotonyora Pokestops yakakukomberedza uye ugoti kana yapera kana inogona kuzununguswa kubvutwa, uyezve inoratidza gyms yakakukomberedza nematanho avo ekuremekedza uye akasimba ekuchengetedza maPokemoni. Iwo ekudzikira pasi: zvinotora zvachose kuongorora uye kurongedza madenderedzwa ese mune iyo hexagonal kuronga iyo iyo app inovaka yakakukomberedza, asi kana iwe uchishivirira, iwe unozopihwa mubairo wakanaka.
Iyi & apos; s zvakare isiri muiyo Play Store, uye isu & apos; tinokurudzira kupokana nekushandisa account yako huru kuti upinde, kunyangwe zviri & n & # 39; t zvakaoma kuramba, sezvo iyo app ichiita kuti iwe utore paPokemon yainowana yakakukomberedza zvakananga uye kuvhura Poke Bhora kurwisa ivo. Pakutanga kuongorora kunonoka, kwete kusiyana nemamwe mapurogiramu akaunganidzwa, asi kana iwe uchinge waziva zvakakomberedza, unogona kutarisa rondedzero yezviri kupi, ingani nguva yasara paPokemon isati yapera, uye daro kune chinangwa . Heck, PokiiMap inozotungidza Google Mepu uye nekukupa madhairekitori kune iyo Pokemon yesarudzo yako, pamwe nezviziviso pavanenge vabara padhuze.
Inotevera imwe yemhando yeAPK, PokeRadar inogona kunge isingave neyekufananidza neyekare zvakare, sezvo ichingova mepu yakataurwa kana kufungidzirwa kuburitsa maPokemoni zvichibva pamishumo yapfuura, asi iri-isina-kunetsa app iyo isingade & apos; haidi izvozvo iwe unopinda neakafa account, uyezve kuisa Pokemoni dzakashumwa kuri nyore kwazvo, pamwe chete navo vangori mupumburu kure pasi pechiso. Bhonasi: unogona kunongedza nzira kune chikara chaunoda kubva kuPokeRadar.
Iyi yawakahwina & apos; yaunowana kuPlay Store, asi haina kugadzirwa zvakanaka kupfuura PokéMapper, ine zvakanaka zvinoonekwa zvinokutendera kuti utaure kana Pidgey iri Pidgey (inoratidzika kunge maEcans muPokéMapper), nzvimbo uye nguva yekupera iyo Pokemon yakakukomberedza. Iyo & apos; inorema kwazvo kumisikidza, sezvo ichida faux Trainer account kuti ishande zvakanaka, asi iyo app inokutungamira maitiro ekumisikidza zvakanyanya, uye iwe unogona kusefa vanotsoropodza, futi.
samsung inoshanda 2 dema chishanu
yakanyanya kushandiswa ipad kutenga
zte axon 7 dema chishanu
Samsung AllShare Cast Dongle media streamer inorova vatengesi, inoita yako mbeveve TV kuve smart
Maitiro ekuchengetedza bhatiri pane iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
Android Wear 2.0 inotanga kuburitsa yeAT & T & apos; s LG Kuona Urbane 2nd Edition
Mitengo yeICloud ichienzaniswa: ndeipi chirongwa chekuchengetedza chaunofanira kuwana?
Java Bvisa zvakapetwa Kubva Chinyorwa
Google inopa zvimwe zvingasarudzwa zvekuvharidzira kufona muapp iwe yaungangofungidzira